၂၀၁၆ ခုနှစ် နယူးယောက်မြို့ စာပေဟောပြောပွဲ နိုဝင်ဘာ ၂၇ အတွက် ဖိတ်စာ | MoeMaKa Burmese News & Media
၂၀၁၆ ခုနှစ် နယူးယောက်မြို့ စာပေဟောပြောပွဲ နိုဝင်ဘာ ၂၇ အတွက် ဖိတ်စာ
(မိုးမခ ကြော်ငြာ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆
27th November, 2016. (9:30am-1:30pm) St. James’ Episcopal Church, 84-07 Broadway. Elmhurst, NY 11373.
ဆက်သွယ်ရန်၊ ဦးကျော်ဝင်း 718- 205-7403, ကိုရန်နိုင်စိုး 347- 730-8770, ကိုနေတင်မြင့် 347- 944-7341, မစန္ဒာ 347- 840-0282, မဧကရီဖြိုး 646- 246-3293, မချောစု 718- 207-4279
မြန်မာရေဘေးသင့် ပြည်သူများ ကူညီရေး ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများ၏ အသက်ဆက်ရောင်ခြည် ဈေးရောင်းပွဲ (သြဂုတ် ၉၊ ဆန်းဒေး)
ဆစ်ဒနီ - Burmese Friendship Association က မိတ်ဆုံဆည်းဆာပွဲ ကျင်းပမယ် (မေလ ၁၇ စနေနေ့)
နယူးယောက်မြို့တော် မြန်မာမိသားစုများ မြန်မာအကြမ်းဖက်အစိုးရကို ကန့်ကွက်ရှုံ့ချမည်
ကမာရွတ်၊ ၀ဂ္ဂီရပ်ကွက်၊ က္ကုစ္ဆာရာမကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ပျံတော်မူ
၈၈ မျိုးဆက် ကိုဌေးကြွယ်နှင့် နယူးယောက်မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ ထပ်ဆင့်နှိုးဆော်ချက်
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသာများ မြန်မာ့ရေဘေး ကူညီဖို့ ရန်ပုံငွေပွဲ ကျင်းပမည်
Mudita Shwekyaung - အရှင်ဥာဏီကာဘိဝသ ကျောင်းထိုင်တဲ့ မုဒိတာရွှေကျောင်း တနှစ်ပြည့်အလှူပွဲ ဖိတ်
အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ မြသိင်္ဂီကြံခင်းပရဟိတသီလရှင်စာသင်တိုက်
Vietjet ကို အခမဲ့နီးပါး စီးနင်းပြီး ဗီယက်နမ်ရိုးရာ စားသောက်ဖွယ်ရာ စစ်စစ်များကို ခံစားလိုက်ပါ
(မိုးမခ) - နတ်မောက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေရေး စာအုပ်အလှူ ထည့်ဝင်နိုင်
ကာတွန်းကိုတေရဲ့ အခွင့်အရေးလေးပဲ ပေးပါ …. https://t.co/NpNT2jM9GN https://t.co/XhH2d0q2Ds about3hours ago ReplyRetweetFavorite